Ben'ny tanànan'Alasora Miangavy ny fanjakana mba hanakatona sekoly
Mitohy hatrany ny fandraisana andraikitra amin’ny ady amin’ny COVID 19 ato Alasora, hoy ny ben’ny tanànan’Alasora, Jimmy Randriantsoa, fa tsy miandry hoe misy “cas contact” indray sanatria.
Hatramin’izao, raha ny fanazavany, dia mbola mitohy hatrany ny ezaka miaraka amin’ny mpitandro filaminana amin’ny fanaraha-maso ireo tsy mitondra arotava sy ny fampodiana ireo tokony hamonjy ny tokantranony ao anatin’izao hahamehana izao. Toy izany koa ny fametrahana ireo fanasana tanana amin’ny toerana be olona. Tato ho ato dia tsikaritra ho mitady hivaha ny fanajana ilay fetra hatramin’ny 1 ora tolakandro, hoy izy, saingy miezaka manabe ireo vahoaka ny kaominina. Nampivarahontsana ny tarehimarika momba ity raharaha COVID 19 ity omaly (TTF: ny zoma teo) ary izaho mahita hoe saika zaza avokoa ireo marary. Ao ny zaza mbola hanala fanadinana CEPE ny sasany. Miangavy aho raha azo atao, hoy hatrany izy, aleo akatona ny sekoly nanao antso avo tamin’ny fitondram-panjakana.